Tuesday February 18, 2020 - 14:12:35 in Wararka by Wariye Qoslaaye
Madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi oo maanta khudbad u jeediyay Baarlamaanka Maamulkiisa ayaa ka hadlay kulankii dhawaan magaalada Adis Ababa kula yeeshay Madaxweynaha Soomaaliya iyo safarka la sheegay in Farmaajo ku imaanayo Hargeysa.
Muuse Biixi ayaa sheegay in Madaxweyne Farmaajo kulan kedis ah oon horey loo sii qorsheyn kula yeeshay Xafiiskka Ra’isul Wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed kadiob markii halkaasi isku arkeen.
” 11-kii Bisha February 2020, waxa igu marti-qaaday Xafiiskiisa Ra’iisal Wasaaraha Dalka Itoobiya, Dr. Abiye Ahmed. Salaan, soo dhawayn iyo kulan kooban kadib, waxa uu ii sheegay in Madaxweynihii Soomaaliya uu isna soo galayo Xafiiska Ra’iisal Wasaaraha in yar kadib. Halkaa ayuu ka bilaabmay kulan kedis ah, oo saddex geesood ah, oo aan hore loo sii qorshayn, oo dhexmaray saddexdayada”
Madaxweynaha Somaliland ayaa sheegay in Ra’isul WasaarahA Itoobiya Abiy Axmed uu ka codsaday in uu dhax gelo uuna dhax dhaxaadiyo Dowlada federaalka Soomalaiya iyo Somaliland, waxa uuna xusay in uu aqbalay soo jeedinta Abiy Axmed.
”Ra’iisal Wasaaraha Itoobiya waxa uu soo jeediyey in uu dhex-galo dhibaatada dhex-taala Somaliland iyo Soomaaliya, maadaama ay tahay qadiyad ka aloosan Gobolka Geeska Afrika, oo uu Ra’iisal Wasaaruhuna u ololeeyo nabadda, horumarka iyo Iskaashiga Gobolka Geeska Afrika. Dabcan, Ra’iisal Wasaaraha Itoobiya oo ah shakhsi ku guulaystay Abaal-marinta Nabadda Adduunka ee (Noble Peace Price), isla markaana hoggaamiya dalka labaad ee ugu dadka badan Qaaradda Afrika; Somaliland ahaan waanu aqbalnay soo jeedinta Ra’iisal Wasaaraha Itoobiya. Kulanku intaas ayuu ku ekaa.” ayuu yiri Madaxweyne Biixi.
Madaxweyne Biixi ayaa sheegay in dalalka Turkiga,Sweden iyo Jabuuti ay aad u daneynayeen sidii wadahadalada labada dhinac loogu bilaabi lahaa.
"Dowladaha Turkiga iyo Sweden waxa ay la xiriireen Madaxweynaha Jamhuuriyadda Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle oo ay ka dalbadeen in aanu dhinacna uga harin sidii dib loogu bilaabi lahaa wada hadalka Soomaaliya iyo Somaliland” ayuu yiri Madaxweyne Muuse Biixi.
Mar uu ka hadlayay raaligelintii uu Madaxweeyne Farmaajo 13kii bishan ka bixiyay xasuuqii loo geystey shacab ku noolaa gobolada Waqooyi ee dalka ayaa waxa uu sheegay in ay kala dhineyd balse uu aqbalay.
"Raalli gelintii Madaxweyne Farmaajo ee 13-kii bishaan siiyay Somaliland waxa ay igu ahayd arrin kedis ama lama filaan ah, waana soo dhaweynayaa, balse waxa ay ahayd in uu ka reebo halka uu ka yiri dhinacyadii jabhadaha ee hubka qaaday” ayuu yiri Muuse Biixi Cabdi.
Madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi ayaa sidoo kale ka hadlay wararka sheegaya in Farmaajo imaanayo Hargeysa' Muuse Biixi Cabdi waxa uu sheegay in aysan is qabaneyn raalli gelinta Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo wararka sheegaya in uu safar ku tagayo Magaalada Hargeysa.
Waxana uu sheegay in booqashada la sheegayo ee Madaxweyne Farmaajo ee magaalada Hargeysa ay dhaawici karto wadahadalada Somaliya iyo Somaliland ayna suurtogal ahayn in uu booqasho ku yimaado Hargeysa madaxweynaha Soomaaliya.
”Hadal haynta imaatinka Madaxweynaha Soomaaliya ee Hargeysa, suurtagal maaha, mana ogolin. Sababtoo ah, sharciga Caalamiga ah, curfiga Dawladnimo iyo caqliga saliimka ahiba, waxay isku raacsan yihiin in aanu Madaxweyne Dalkiisu gaystay dambiyada iyo xasuuqa intaa leeg, in aanay suurtagal ahayn in uu booqasho ugu tago dadkii iyo dalkii dambiyada loo gaystay. Madaxweynaha Soomaaliya waxa uu iman karaa kaliya Somaliland marka uu ictiraafo Qarannimada Somaliland” ayuu yiri Muuse Biixi.
Hadalka Muuse Biixi ayaa kusoo aadaya xili maalmihii lasoo dhaafay aad loo hadal hayay in Madaxweynaha Soomaaliya booqasho ku tagayo magaalada Hargeysa kadib markii Ra’isul Wasaaraha Itoobiya Muuse Biixi ku cadaadiyay in Framaajo Hargeysa kusoo dhaweeyo.